Oromoon Waraaqisa Bilisummaa qeeroon gegeesa jirau kana tumsuu qaba male diinati hidhuu hin qabu.
Qabsoon kun abba qaba insi uumata Oromooti isaatu itti du'aa jira, qindessasi qaba qeeroon Bilisummaa Oromoo wagoota 10 darban FDG gegesa jira, amalee tasgabin qindessa jira, gargaruu, gorsuu, tumsuu fi waan hunda birra dhabachuun dirqama Oromoo hundati.G/L
Namni Zalamem jemaane jedhamu official OPDO yeroo ammaa DC keessa akka jiru baramee jira Namni kun master palan laalchisee fi karaa adda addaan wanni irri godhe jedhame keessa beeytooni akka jedhanitti
I. Ilmaan Oromoo hedduun akka hidhaman,ajjeefaman fi biyya isaani irraa akka buqqaa'aan godhe dha. 2. Barattoonni Oromoo yaalii Godiina addaa naannoo finfinnee magaalaa finfinnee jala galchu irratti mormii qaban karaa nagaan yeroo ibsan Tarkaanfiin ajjeechaa fi hidhaa warraana Agaziin akka isaan irratti fudhatamu warra mallateesse keessaa isa tokko.3. Ob.Alemayoo Atomsa waliin wal qabate harkii Ob. Zelalem Jamane akka keessa jiru namoonni dubataniis ni jiru. 4. TVOromiyaa keessaa gazexxeessiittoonni Oromoo akka hojii isaani irraa ar'iaman ajajja olaanaa TPLF irraa darbeef akka hojiira olu warra godhe keessaa inii isa tokko.
Walumaa gala namichii kun Ummata Oromoo irratti yakka guddaa nama raawwate dha. Egaa yaa Oromoo yeroo ammaa.Ob. Zelalem Jamane biyya Amerikaa Maryland jedhamu keessa dhimma master plani finfinne ilaalchiise namoota wajjiin marii gaggeessuuf sagantaa qabatee jira jachuun dhagayamaa jira. Kannen walgahii kana isaaf qopheessaa jiruus kanneenuma Oromoo tahani Qopheessaa jiruu fi mana eenyutti akka godhamuus baramee jira. Itti baha isaa fuldura isiniif maxxansa.
Wanni beekkamu qabu garuu - yero ammaan tana kanneen dhiiga oromoof itti gaafatama qaban biyya keessatti oromoo ficisiisuu bira taree, biyya alaatillee duubbe isaanii dhooysuu fi afanfaajjii oofuuf dhooysaan akka bobahaa jirani dha.
II. Yero ammaan tanaa warri G7-Arbanyoch FXG kana kan ofii taasisuuf olii fi gad fiigaa jru. Kana keessaa wanni mul’ataan argamaa jiru Karaa waldayoota Ethiopia dhaan hiriira waliinn haabaanu jedhani bakkoota adda addatti namoota yaada isaanii qaban ykn isaanuma jala kaachaa jiru qunnamanii walgayoota oromoo hedduu qunnamani jiru. Bakka hedduti deebisaan deebifamaa jiru, yoo nu gargaaruu barbaaddan alaabaa keessan dhiiftani nuun waliil (solidarity) garsiisuu isa jedhu. Gaaffiin bakka hedduu irraa itti ka’e keessaa fincila kana oromoon itti dhumaa jirti isiniis jibbansa wayyaanee akka qabdan ni beeyna garuu maaliif ummata keessan biyya keessatti akka hiriirani Joollee oromoo bira hin dhaabbanne kan jedhu. Bakka garitti oromoo of dandeessee dhumaa jirti asitiis nuti of dandeenye godhanna stay out kan jedhu.
Eegaa gama kiyyaan Oromoon Amaara irraa jibbansa hin qabdu, akkan namatti. Garuu sababaa kananaan FXG kana akka Oromoon qoftiin itti dhumaa jirtu dhooysani aluma kanaa kan Ethiopia fakkeessuuf tattaafachuu irrati gaaffiin gubbatti hawaasoonni adda addaa gaafachaa jiru waan dansa natti fakkaata.
III. Abanyoch G7 jiddutti akka rakkoon jirtu himama. Keessaafi erga DT TPDM Wayyaaletti gale booda kan booda akka DT taheefiBirhanu jidduu rakkoon dhalate kan jedhu. TPDM waliigaltee duraan “Agar Adin” jedhamee mallateefame keessa bahuuf akka barbaaddu warruma abashaa keessaa dhagayamaa jira. Ku hedduu isaan rifachiisee akka jiruuf amma FXG kana keessa akka taatetti maqaa isaani yoo galfatan saniin Wayyaalee waliin negotiate godhuu barbaadu. Kana ammoo waan beeytoonni isaani barreessanii fi waan deemaa jiru irraa hubachuun ni dandayama
Inni guddaan akka toftatti fudhatan Oromoota isaanirraa cituu hin dandeenye, Oromoo keessaa warra babeekkamoo tana, Mangudoota oromoo beekkamo faa qabatani Kana keessaa akka humna waliigalee FXG kana keessaa qooda fudhachaa jiruu fi gaggeessa jirutti of dhiheessuu dha.. Kanaaf walgahillee adda addaa DC keessatii fi bakkota adda ddatti gaggeessaa jiru.Kanneen isaan walgahiilee kana aliin gageessaa jiran gariin kanuma ABO dhabamsiisuuf carraaqan fi kanneen jibbansa ABO qabani dha – ayyaan laallatoota dabalate. Arbanyoch-G7 ammoo mirga ummata Ormoo hiree isaa murteeffachuu dura dhaaba dhaabbatu. Jarmyaan kun kan hogganamu Mesfin Woldemariam dhaan ideology dhaan. Mesfin Woldemariam ammoo ummta Oromoo akka sabaattu kan diina godhataa jiraate dha umurii guutuu.
Toftaan isaan deemaniin haala amma jiruu fi kan gara fuula duraa kana ABO fi jarmyoota Bilisummaaf lolan moggeessuun wareegama butatuuf Itophiyaan addaan akka hin facaane tiksina jedhuunis faranjitti dhihaatuun gufuu Bilisummaa fi Walabummaaf danqaruuf deeman tahuu tilmaamuun nama hin rakkisu.
IV. Ibsi PAFD baase fi dhaaboonni PAFD keessa jira waamicha Ummata isaaniif godha fi Ibsoota isaan baasan laalchisee kanneen ABO fi oromoo irratti rirrigatani fedhii isaani guutachuuf waan adda adda ofaa jiran hedduu rifachisee jira. Kanaaf PAFD irratti duuluu fi dhaaboota PAFD keessa jiran akka matayyatti qunnamuunABOn biyyatii ciciruu barbaada, isin Ethiopia warra barbaadu, sagantaa keessan wayyeefachuun mootummatii sana qabannee waliin bulchina ykn mootummaa dhaabbana jedhani bobbaan isaan oofan jlaa fashaluu irraa kan ka’e oloola kana oofaa jiru. Sodaan isaani inni guddaan PAFD keessa dhaabonni iran ummata isaani kaasani akkuma oromotti yoo fincilan bakka nu dhabsiisu isa jedhu.
V. Kan bira hiriirii biyyaa keessaa kun cimaa fi dhabbataan Mootummaa EPRDF irratti dhibdee tahaa dhufeen wan nutti waraaqa Prof. Masyii Kebede akkumaa Article tokkotti dubbisinnee dhiifnee ambii akkamiitti Oromoo irratti hojeetanii irra fayyadamuu isa jeedhuutti turan. Dr. Getachew Bagashaw (G7) faan kanuma hujji irra oolchuuf namotaa Oromoo tahan keessaa namoonii akka wal "influence" gochuu dandayan nu keessatti fi jarmoolee Oromoo biroo "lobby" odhachaa turan. Adeemsi kun Nuhamin Zeleke faan akka gad bahani contact person faa jedhuuni web site isaani irratti list godhani jiru – qindeesitoota sochii FXG Ethiopia godhuu irratti jachuu dha. Akkumaan reefu jedhetti G7 kajaan qabatee Wayyaanee waliin Negotiate godhuu dha – karoorri isaani hundi harkatti bacancaraa jira. Kana keessaa dura Abo fi hogganoota yaada isaani dura dhaabbatan irratti xiiyyeefachiisuuf karaa lafajalaan hojjachuu faa akka sagateefatan keessa beeytoonni ni himu.
Xumura irratti QBO keessatti diinaa fi fira qabaachuu keenya beekuun murteessaa dha. Qabsoon teeya qabsoo haqaa waan tateef shiroota hedduu keessa dabarree as geenye. Waan taheef, haalli tanaan dura ture akka nutti hin deebine waan dhageenyee wal dhageesisuun barbaachisaa dha kan jedhuun odeessa kana isiniif kennaa jira. Inni guddan diina keenya beeku keessatti dogogorre saba biroo ykn dhaaba biroo irratti duula banuun ammatti hin barbaachisu. Fedhiin isaani sochii ABO gadi qabuun kanneen oromoo tahan dahoo godhatani of mul’isuun FXG kana kan ofii godhuun aangoo qabana kan jedhu waan taheef, itti damaquu keenya itti himuu dha.
Gara keenyaan ammoo akka FXG kun gara biroti hin ooffamne eeggannoo barbaachisu godhuu dha. Akka oromotti Amaara irraa dhibdee hin qabnu. Waan taheefis isaaniis akkuma keeyatti victims tahuu isaani beeyne, gama keenyaa qabsoo teenya itti fufuu WBO jabeessu, ummata keenya jabeessuu fi gargaaru dha.
Kumkummee Sirbaa FB